Ahoana ny famakiana sy famaliana WhatsApp nefa tsy miseho amin'ny Internet | iPhone News
Ahoana ny famakiana sy famaliana WhatsApp nefa tsy miseho amin'ny Internet
Miguel Hernandez | 15/05/2022 18:00 | maro
WhatsApp, ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo malaza indrindra eran-tany, na farafaharatsiny izay manana mpampiasa betsaka indrindra, tsy misy resaka. Taorian'ny fahazoana azy tamin'ny Facebook dia voaloto ny hoaviny, na izany aza, ny fanatsarana sy ny fiasa tsy tapaka dia nahatonga ny WhatsApp ho fitaovam-pifandraisana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao.
Na izany aza, indraindray izahay te-ho afaka miditra amin'ny atiny nefa tsy arahin'ny hafa, noho izany Hampianatra anao mamaky sy mamaly ny WhatsApp izahay nefa tsy misy mahafantatra fa an-tserasera ianao, andiana toro-hevitra sy endri-javatra izay hanamora ny fiainanao amin'ny iPhone ary ahafahanao manala ireo zavatra mavesatra.
Vao haingana tao amin'ny Ny "fihetsika" WhatsApp dia nampidirina Fampiasa nolovaina tao amin'ny Facebook sy ny rindranasa fandefasana hafatra ao anatiny izay efa nampidirina tsara, saingy tsy mahavaha olana kely izany, dia ny fahafahana mamaky sy mamaly ny WhatsApp nefa tsy miseho "an-tserasera", na farafaharatsiny tsy fantatry ny olona fa efa lasa isika. mifandray amin'ny app. Holazainay aminao ireo kely rehetra ireo fitaka.
1 Alefaso ny fampisehoana ao amin'ny Foibem-pampandrenesana
2 Mampiasa Siri
3 Valiny avy amin'ny fampandrenesana
4 Atsaharo ny fifandraisanao farany
Alefaso ny fampisehoana ao amin'ny Foibem-pampandrenesana
Ny Foibem-pampandrenesana dia manome antsika famintinana fohy momba ireo hafatra WhatsApp voarainay, na izany aza, dia hiseho ho toy ny "hafatra" izany ary tsy hampiseho amintsika ny atiny, farafaharatsiny rehefa mihidy ny fitaovana. Mba hahafahana miditra haingana kokoa amin'ireo hafatra ireo sy mahita azy ireo ao amin'ny Foibem-pampandrenesana dia tsy maintsy miditra amin'ny WhatsApp ianao ary manaraka ireto torolàlana manaraka ireto: Settings> Fampandrenesana> Preview> On.
Amin'izany fomba izany, ireo hafatra voaray dia haseho tanteraka ao amin'ny Foibem-pampandrenesana, saingy mbola hanana toe-javatra iray hamboarina isika, dia ireto manaraka ireto: Settings> Fampandrenesana> WhatsApp> Asehoy ny fijery> Foana.
Toy izany no hanehoana ny preview na inona na inona ny iPhone dia mihidy na tsia, zavatra izay hanamora ny asantsika.
Azontsika atao koa ny mampiasa Siri mba hanehoana hevitra momba ny hafatra WhatsApp rehetra izay azontsika ary dia mamaky azy tsirairay avy, mahafantatra hoe iza no nandefa azy ireo ho antsika. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manaraka ny lalana config: Settings> Siri sy fikarohana> WhatsApp Consult Siri> Activate.
Raha vantany vao azo antoka fa vita tokoa io fanitsiana io, dia omenay fotsiny ny torolàlana mazava: Ry Siri, vakio amiko ny hafatra WhatsApp.
Amin'izany fomba izany dia hamakiana antsika ireo hafatra WhatsApp izay miandry antsika, hampahafantatra antsika ny mpandefa ilay hafatra ary avy eo dia hamaky antsika tsirairay ny votoatiny. Izany no tsy isalasalana fa iray amin'ireo fomba tsara indrindra hamaky ny WhatsApp hafatra tsy misy mahalala.
Valiny avy amin'ny fampandrenesana
Ny fifandraisana amin'ny fampandrenesana dia zavatra efa nampidirina tao amin'ny dikan-teny samihafa amin'ny iOS sy iPadOS nandritra ny fotoana ela, ka raha ny tokony ho izy dia tokony ho fantatsika momba izany, fa mampahatsiahy anao fa mora izany. Tsy maintsy manindry lava fotsiny ny hafatra azonao tao amin'ny Foibem-pampandrenesana ianao ary hisokatra eo amin'ny faran'ny efijery ny klavier mba hahafahanao mamaly ilay hafatra.
Amin'izany fomba izany dia hamaly hafatra manokana ianao nefa tsy mila miditra amin'ny fampiharana, noho izany dia tsy hiseho "an-tserasera" ianao na mifandray ary tsy hiseho ny fotoana farany amin'ny fifandraisanao na dia afaka namaky sy namaly aza ianao. hoy ny hafatra, iray amin'ireo fomba haingana sy mahaliana indrindra hifaneraserana amin'ny hafatra tsy misy mahalala.
Atsaharo ny fifandraisanao farany
Tsarovy fa azonao atao foana ny manatanteraka ny asa mahazatra amin'ny fanesorana ny fifandraisana farany ary na dia ny fanamarinana manga aza rehefa namaky hafatra. Ity no fepetra mahazatra indrindra hijanonana ho "tsy fantatra anarana" tanteraka rehefa miditra sy mivoaka ny WhatsApp, ka manalavitra ny mason'ireo izay mahafantatra ny fotoana farany nidiranao ny fampiharana na namaly hafatra. Izaho manokana dia tsy manana ity fandrindrana ity, saingy azoko tsara ny antony maha-zava-dehibe azy io ho an'ny mpampiasa sasany.
Mba hampavitrika/famonoana ny fanamafisana vakiana, izany hoe ny fanamarinana manga, dia tsy maintsy miditra fotsiny isika WhatsApp> Fikirana> Kaonty> tsiambaratelo> Vakio ny tapakila. Amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny mahafantatra fa raha manaisotra ny tapakila mamaky ianao dia tsy ho hitanao ny an'ny hafa. Ny chat groupe, eny, dia hahazo fanamafisam-peo foana, na efa navitrika ity fampiasa ity na tsia.
Raha ny fifandraisana farany dia tsy maintsy manaraka ny lalana isika WhatsApp> Fikirana> Kaonty> Farany. fotoana ary rehefa ao anatiny dia amboary ny traikefa:
Rehetra: Izay mpampiasa manana ny nomerao voatanisa ao amin'ny bokim-telefaona dia afaka mahita ny fifandraisanao farany amin'ny WhatsApp.
Ny fifandraisako: Ny fifandraisana izay nampidirinao tao amin'ny bokin'ny adiresinao ihany no afaka mahita ny fifandraisanao farany amin'ny WhatsApp.
Ireo mpifandray amiko, afa-tsy: Mitovy tanteraka amin'ny fiasa teo aloha, fa ho afaka hanampy manokana manokana isika, izany hoe, mpampiasa sasany izay tsy tiantsika ny hahita ny fifandraisantsika farany amin'ny WhatsApp.
Tsy misy: Amin'ity tranga ity, tsy misy mpampiasa afaka mahita ny fifandraisantsika farany amin'ny WhatsApp.
Ary ireto no tetika rehetra nentinay ho anao mba hahafahanao mamaly hafatra amin'ny WhatsApp sy mamaky azy ireo tsy mila fantatry ny olona fa efa nifandray ianao na efa tao anatin'ny fampiharana, zavatra manome "plus" amin'ny fiainana manokana sy fitoniana amin'ny andronao ary mety hanamora ny fiainanao izany. Mampahatsiahy anao izany izahay ny fantsona Discord dia azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa rehetra izay ahitanao ireo fika ireo sy ny maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ahoana ny famakiana sy famaliana WhatsApp nefa tsy miseho amin'ny Internet